लिम्वूवान - अन्तर्वार्ताहरु: नविन सुब्बासँगको अन्तरवार्ता
नविन सुब्बासँगको अन्तरवार्ता
बि.सं. २०२४ सालमा मेची अञ्चल ताप्लेजुंग जिल्ला अन्तर्गत ढुंगेसाँघु गा.वि.स. ८ मा जन्मनु भएका नविन सुब्बाले स्नातक सम्म अध्यायन गर्नु भएको छ । लेखन क्षेत्रमा गीत कविता,चलचित्र समीक्षा,पत्रकारीता अंगाल्दा अंगाल्दै लिम्बुभाषाको चलचित्र नूमाफूङको निर्देशन गरेर चर्चाको शिखरमा पुग्नु भयो। त्यसपछि उनले बिभिन्न क्षेत्रबाट सम्मानित भए । बिभिन्न संघसंस्थाबाट पुरस्कृत पनि भए । बिशेष गरेर हाल आएर उनी फिल्म निर्देशन क्षेत्र मै ब्यस्त रहनु भएको छ । उनै चर्चित निर्देशक नविन सुब्बा हंगकंग भ्रमणमा रहनु भएको वेला लिम्बुवान ब्लगर टंक सम्वाहाम्फेले लिनु भएको अन्तरवार्ता पाठकहरुको लागि प्रस्तुत गरिएको छ ।
१.अहिले तपाई के काममा ब्यस्त रहनु भएको छ ?
केहि समय अघि देखि दलितहरु माथि केन्द्रित रहेर टेलिसिरीयल झण्डै चालिस र्इपिसोड जति लामो निर्माण तथा निर्देशनमा ब्यस्त थिए । त्यो समाप्त भएर नेपाली टेलिभिजनबाट प्रशारण पनि भैसक्यो । खासगरि म त्यहि ब्यस्त थिए तर अहिले भने नयाँ फिल्म निर्माण गर्नको लागि तयारीमा जुटेको छु ।
२.नूमाफूङ चलचित्रको डिभिडि निकाल्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनियो के त्यो साचो हो ?
अहिले हामी केहि नयाँ कामहरु गर्न गैरहेकाछौ र नूमाफूङ चलचित्र बनाएको पनि निक्कै लामो समय भयो त्यसैले नूमाफूङ चलचित्रको डिभिडि निकाल्ने मानसिकतामा चाहिँ छौं । तर यहि समयमा अन्य काम पनि गर्नुपर्ने भएकोले त्यो काम पछाडि जान पनि सक्छ । निकट भविष्यमा नूमाफूङ चलचित्रको डिभिडि सार्वजानिक गर्ने नै छौं ।
३.चलचित्र बिकास वोर्डको अध्यक्ष पदमा तपाईको नाम पनि प्रस्तावित भएको छापामा आएको थियो तर उक्त पद किन ग्रहण गर्न चाहनु भएन ?
चलभित्र बिकास वोर्डमा मेरो नाम प्रस्तावित भएको हो । तर मैले सार्वजानिक पद धारण नगर्ने भनेर पहिले देखि नै बोल्दै आएको हुनाले पद ग्रहण गरिन । खासगरि चलचित्र बिकास वोर्डको संरचना र सैद्धान्तिक असहमतिका कारणले पनि म त्यता जान नचाहेको हुँ । अहिले पनि चलचित्र बिकास वोर्डसरकार अन्तर्गत छ तर हुनुपर्थ्यो के भने संसारभरि कै अनुभवमा त्यो चाहिँ राज्य अन्तर्गत हुनुपर्छ । किनकी संस्कृति भनेको राज्य अर्न्तर्गत नै हुन्छ । संस्कृति भनेको कुनै पार्टीको संस्कृति होइन । देशको संस्कृति हो । देशको संस्कृति हुने हो भने राज्यको संस्कृति हुनु पर्यो । किनकी चलचित्र बिकास वोर्ड भनेको संस्कृतिलाई बोक्ने मुख्य माध्यम हो । त्यो माध्यममा जति निति नियमहरु बनिनु पर्छ भने राज्यले नै निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसैले चलचित्र बिकास वोर्ड राज्य अन्तर्गत जानुपर्छ । र वोर्डलाई स्वायत्तता पनि दिनु पर्छ । साथै चलचित्र कर्मीहरु माथि राजनैतिक हस्तक्षेप पनि हुनुहुदैन ।
४.हाल आएर नेपाली चलचित्रको भविष्य कस्तो देखि रहनु भएको छ ?
जहाँ सम्म नेपाली चलचित्रको भविष्य अत्यान्तै उज्यालो देख्छु । केहि समय अगाडिको समाचार हेर्नु भयो भने देख्नु हुनेछ एउटै कम्पनीले सात सात वटा चलचित्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको कुरा । पार्टीले पनि राजनैतिक सिद्धान्त प्रचार प्रसार गर्नको निम्ति चलचित्र बनाउँने घोषणा गरिरहेकाछन् । त्यो लगायत क्षेत्रियरुपमा र समुदायको आफ्नैचलचित्रहरु पनि निर्माण गर्ने भनि राखेकाछन् । र नेपाली चलचित्रले बिस्तारै अन्तर्राट्रिय मान्यताहरु पनि प्राप्त गरि राखेकाछन् । अन्तर्राट्रिय रुपमा नेपाली चलचित्र स्विकार्य भैरहेकाछन् । त्यो कारणले गर्दा खेरि म चाहिँ नेपाली चलचित्रको भविष्य कलात्मक,रचनात्मक मात्र होइन ब्यावसायीक रुपमा पनि राम्रो देख्छु ।
५.तपाई लिम्वु चलचित्र निर्देशक भएकोले लिम्बुवान स्वायत्त आन्दोलनलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ? साथै लिम्बुवान प्रति तपाईको धारणा ?
लिम्बुवान स्वायत्तताको लागि मात्र होइन समग्ररुपमा जनआन्दोलन भाग २ अथवा २०६२,६३ मा म आफै पनि संलग्न थिए । क्यामरा बोकेर लाठी चार्ज हुँदा खेरि गोली बर्सिदा खेरि छाती थापेर अगाडि उभिरहेका थियौं । लाठी चार्ज हुँदा हाम्रो क्यामरा माथि परेको थियो त्यति मात्र नभएर हाम्रो जीउमा पनि परेको थियो । २०६२,६३ को आन्दोलनको म्याण्डेड के भने राज्यको यथास्थिति संरचना अव स्विकार्य छैन र यसको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । पुनर्संरचना भनेको चाहिँ पावर एकात्मक र केन्द्रिकृत होइन । पावर भाहिँ डिसेन्ट्रलाईज हुनुपर्छ । पावर तल्लो तह सम्म हुनुपर्छ । संसारमा भएको देखिएको संरचनाका अभ्यासहरु मध्ये संघात्मकता चाहिँ सवै भन्दा उपयुक्त माध्यम हो । राज्य पुनर्संरचना हुँदा त्यसरी हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो बिचमा मलाई धेरै राष्ट्र घुम्ने मौका मिल्यो । ती राष्ट्रहरुको बिकास समृद्धिलाई हेर्दा र उनीहरुले उदार गरेको राज्यब्यवस्थाको संरचना हेर्दा खेरि जस्तै भारत,स्विजरलेण्ड,आदिमा एकात्मक नभएर संघात्मक शासन प्रणाली छ । त्यो कारणले गर्दा खेरि देश संघात्मकमा जानै पर्छ । जहाँ सम्म लिम्बसवानको प्रसंग छ आफु लिम्बु भएकोले मलाई के लाग्छ भने लिम्बुहरुको संस्कृति भाषा र लिम्बुहरुको समग्र विकासको निम्ति यदि लिम्बुवान भयो भने त्यसले ठुलो टेवा पुर्याउँने छ । त्यसैको लागि लिम्बुवान आवश्यक छ । लिम्बुवानका विभिन्न आधारभूमिहरु पनि छन् । लिम्बुवान भनेको यस्तो क्षेत्र हो जुन एकिकरणको क्रममा पनि सम्झौता द्वारा स्वायत्तता प्राप्त गरेको हो । त्यसपछि पनि बि.सं.२०२१ साल सम्म स्वायत्तता थियो । किपट प्रथाको रुपमा सुभाङ्गीको रुपमा शक्ति चाहिँ लिम्बुहरु आफैले नै अभ्यास गरिरहेका थिए । त्यसले गर्दा लिम्बुवान सवभन्दा सवल दावेदार हो स्वायत्तताको लागि र संघात्मकताको लागि । तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ केहि राजनैतिक पार्टीहरुले पनि जनमानसमा लिम्बुवानका विषयबस्तुहरु अगाडी बर्ढाई राखेकाछन् । तर अब भने कलाकर्मी संस्कृतिकर्मीले पनि यो बिषयमा बोल्नु पर्ने आवश्यकता आयो । त्यसैले लिम्बुवान स्वायत्तता हुनुपर्छ भनेर म बोलि रहेको छु ।
६.केहि नयाँ योजनाहरु छन् कि ?
अब म हङकङबाट फर्किने वित्तिक्कै एउटा फ्रान्स नेपालको संयुक्त लगानीमा एउटा चलचित्र निर्माण भैरहेको छ । त्यस काममा ब्यस्त हुन्छु । त्यसपछि अर्को चलचित्र राजाले शक्ति हातमा लिएको समयको युवाहरुको मनस्थिति विश्लेषण भएको गुडबाई काठमाडौ छ । अहिलेलाई म यिनै २ वटा काममा आफुलाई केन्द्रित गरिरहेको छु ।
७.लिम्बुवान ब्लगस्पोट डटकम्बाट केहि शन्देस दिन चाहनु हुन्छ कि ?
सवभन्दा पहिले लिम्बुवान ब्लगका सञ्चालक टंक सम्वाहाम्फे जीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकी ब्लग जस्तो डायरी लेख्ने ठाउँलाई राजनैतिक विषय उठाएर राम्रो काम गर्नु भएको छ । गर्ने जाँघर भए यस्तो सानो परिवेसबाट ठुल्ठुला कुराहरु उठान गर्न सकिने रहेछ । किनभने त्यो ठुलो काम यो ब्लगले गरिरहेको छ । अर्को तिर हङकङ जस्तो फुर्सदै नहुने ठाउँमा रहेर यो काममा दिनहुँ खट्नु झन गाह्रो काम हो । काम साधारण जस्तो देखिए पनि यो काम साधारण र सजिलो पक्कै छैन । कुनै दिन यसको कदर पक्कै हुनेछ । र म यो ब्लगबाट बिश्वभर छरिएर रहनु भएको लिम्बु तथा गैरलिम्बुहरुलाई लिम्बुवानको लागि जुट्न आग्रह गर्दछु । म पनि लिम्बुवानको लागि संस्कृतिकरुपले निरन्तर जुटि रहने छु ।
Posted by limbu at 6:41 AM
Nabin subba ji sanga ko antarabaat nikkai ramro lagee. jasako nimti thulo kasarat garnu hune, Limbuwan blogspot ka sampadak jee murio muri dhanyabat. ra tapaiko yo kadam harapal yasari aghi badi rahos..........
Laje Yakthung said...